प्रचण्डको राजनीति अब संकटमा,के गर्लान त प्रचण्ड? - Ujyaalo Sandesh Online
काठमाडौं : फागुन २६, ओलीको निगरानीमा पटक पटक मन्त्री बनेका र लाभको पद हासिल गरेका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरु अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको दैलोमा भीड लाग्न थालेका थिए । जसका कारण ओली पार्टीको सचिवालयदेखि तल्लो तहसम्मका सबै संगठनहरुमा अल्पमतमा देखिए । एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्ने र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको मनोनीत कोटामा लैजाने सचिवालयको निर्णयमा ओली करिब करिब एक्लै भएका थिए । परिस्थिति आफ्नो पक्षमा हुँदा जाडोयामको सर्पझैँ गुडुल्किएर बस्ने, परिस्थिति अनुकूल हुँदा प्रचण्ड गर्मीयामको गोमन सर्पका रुपमा प्रकट हुने ओलीको स्वभावलाई सबैभन्दा बढी नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले हेरिरहेका थिए। त्यसैले स्वास्थ्यमा सुधार भएर फर्किएपछि ओलीको टार्गेटमा को को नेता पर्ने हुन पार्टी भित्र खोजी सुरु भएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार आफूले सबैभन्दा ठूलो धोका प्रचण्डबाट पाएको महसुस ओलीले गरिका छन्। वामदेव प्रकरणपछि ओलीले आफ्ना निकटका नेताहरुसँग टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘हामीले त आफ्नै भनेर पो प्रचण्डलाई पार्टीमा मिसायौं, तर क्षेपारो पो परेछ ।’ स्रोतका अनुसार क्षेपारोलाइ मास्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । तर क्षेपारो मास्दा त्यसको बीउ नै काट्नुपर्ने हुन्छ । काटेर फाल्नुपर्ने बिउहरु कुन कुन हुन् ? भन्ने पहिचान अब प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने भएका छन् ।
प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री के.पि ओलि
स्रोतका अनुसार वामदेव गौतम, केशव स्थापित लगायतको टोली प्रचण्डसँग सति जाने निश्चित भइसकेको छ भने माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतका नेताहरु दोधारमा छन् । पार्टीभित्र सियो बनेका छन् । यता प्रचण्डसँगै समाहित भएका तत्कालीन माओवादीका करिब २५ प्रतिशत नेता तथा कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री ओलीसँग नियमित सम्पर्कमा भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार तत्कालीन माओवादीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ सांसदमध्ये प्रचण्डसँग २५ जना छन् । समानुपातिक १७ जनामध्ये प्रचण्डसँग १४ जना छन् । तर ४० प्रतिशत पुर्याउँनलाई कम्तीमा ६६ प्रतिनिधि सांसद चाहिन्छ । वामदेव गौतम समूहले कति सांसद जुटाइदिने हो ? पत्तो छैन । झलनाथले अन्तिम अवस्थामा प्रचण्डको साथ छाड्ने बुझिएको छ ।
प्रचण्डले कुन कुन व्यापारीहरुलाई पैसा लगानी गरेका छन् ? भन्ने सबै लिस्ट उनी निकट निवर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दुई महिना पहिले नै तयार पारेका थिए । अब यो पक्षमा रहेकाहरुलाई अनेक लफडा लगाउने रणनीतिमा ओली पक्ष जुटिसकेको छ । साथै मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रकरणमा प्रचण्डकी बुहारीसमेत रहेकी मन्त्री विना मगरले २५ करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो आफूसँग सुरक्षित भएको तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले सार्वजनिक गरेका थिए । ठाकुरलाई राजदूत बनाउने आश्वासन दिएर उक्त रेकर्ड प्रधानमन्त्री ओलीको टिमले आफ्नो खल्तीमा ल्याइसकेको बुझिएको छ ।
अनलाइन बजारमा ह्याकरको आँखा।